Ii-FAQs -I-Guangzhou Meiyi yeTekhnoloji yeTekhnoloji Co.
Ubuncinci be-Order Order
Abathengi abatsha banokubeka iodolo yokuvavanya imveliso’Umgangatho kunye nentengiso kwiimarike zabo.
Eli lixesha lam lokuqala ukusebenzisa umatshini womdlalo, kunzima ukuwufaka?
Hayi, Kulula kakhulu ukuyifaka, xa unempahla, inokusebenza ngokuthe ngqo emva kwamandla.
Ukuba umbane kunye neplagi yemveliso yakho ziya kuza nomgangatho wam?
Siza kuqinisekisa ulwazi lwevolthi kunye neplagi kunye nomthengi kwangaphambili kwaye sivelise oomatshini njengomthengi’Isicelo.
Ukuba inkampani yakho ungenza isiko imveliso kwaye ubeke logo yethu?
Sineqela lomyili, sinokuyila kunye nokwenza ngokwesiko zonke iimveliso kubandakanya umbala, ukuprinta, iphethini kunye nelogo.
Ngaba uyanikezela emva kwenkonzo, kwanakwilizwe lethu?
Ewe! le yinkxaso ebalulekileyo. Siqinisekisa unyaka omnye iwaranti + ebomini inkxaso yenkxaso yobugcisa. (I-PCB yonyaka omnye iwaranti yasimahla, indawo enxiba ngokukhawuleza iwaranti iinyanga ezintathu); amagcisa ethu aya kukukhokela ngomonde kwi-intanethi, enze isisombululo esifanelekileyo ngemifanekiso kunye neevidiyo zabathengi, ezibonisa indlela yokufaka okanye yokulungisa ukusebenza inyathelo ngenyathelo. Indawo yokuphumla siza kuyifaka endaweni yomthengi ngohlobo lwentlawulo okanye ngaphandle kwentlawulo.
Sifuna imidlalo eyahlukeneyo. Ungandenzela lonto?
Sinamava eminyaka eli-12 kushishino lomdlalo. Siyavuya kakhulu ukunceda abathengi bethu bathenge oomatshini abathandayo. Kulula kakhulu kuthi. Inkonzo ayihlawulelwa
Ixesha lokuphila kwemveliso yakho?
Bonke oomatshini bakhelwe ngezinto ezintsha ezikumgangatho ophezulu. Ke oomatshini bonke bakwixesha elide lobomi kwiminyaka edlulileyo, kwaye banengxaki yokufumana ingxaki. Abathengi banokufumana ukubhatalwa kungekudala kwaye benze inzuzo iminyaka emininzi.
Indlela yokungenisa ngaphandle isuka eChina?
Ilula kakhulu, ihlala ikhetha iindlela ezintathu:
1. sijongana nexabiso le-EXW, unoxanduva lokuhambisa iimveliso ezivela e-China zisiya kwilizwe lakho. Kuya kufuneka ufumane umthengisi ngokwesiko ukuze akuncede ususe amasiko ukuze ufumane iimpahla kwiziko lakho.
2. Sisebenzisana nexabiso le-CIF, siya kuzithumela iimpahla kwizibuko elikufutshane nesixeko sakho, ufumane iarhente yokuhambisa ukuze ikuncede ucacise amasiko ukuze ufumane iimpahla kumasiko endawo.
Ngokwesiqhelo, ukuba ufuna ukungenisa eTshayina ixesha elide, ndicebisa ukuba usebenzise indlela yokuqala. Ukuba awuyazi iarhente yakho yengingqi okanye inkampani yokukhutshwa kwamasiko, ndingacebisa iiarhente ezithembakeleyo kuwe.
Kuya kuthatha ixesha elingakanani ukuhambisa iimpahla ezivela e-China zisiya kwilizwe lam?
Ngokubhekiselele kumaxesha ahlukeneyo izibuko lahlukile. Ukuthetha ngokubanzi’s inyanga enye elwandle, iintsuku ezi-3-7 zomsebenzi ngomoya.
Ukuba inkampani yakho inokundinceda ndigcine ihotele ukuba siza kutyelela umzi-mveliso wakho?
Inkampani yethu inokunceda umthengi agcine ihotele ukuba uza e-China kwaye sinokukhetha umthengi kwisikhululo seenqwelomoya okanye ehotele ukuba kukho imfuneko.